काठमाडौं, ११ माघ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता एवम् वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले भने शुल्क बढाउन गरिएको सिफारिस प्रती आपत्ति जनाएका छन् । शनिवार चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण समितिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको शुल्क बढाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आगामी आठ वर्षभित्र देशका सबै मेडिकल कलेज गैर–नाफामुलक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसैको तयारी स्वरुप शुल्क कम गर्दै लैजानुपर्ने डा केसीले बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको आजिवन सदस्य समेत रहेका डा. केसीले कोरोना महामारीका कारण अभिभावक र विद्यार्थी मारमा परेका बेला शुल्क बढाउने काम कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नभएको बताए ।
आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले भने, “चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आगामी आठ वर्षभित्र देशका सबै मेडिकल कलेज गैर–नाफामुलक हुनुपर्नेछ । त्यसैले यसै पनि शुल्क कम गर्दै लगिनु पर्ने हो । त्यसमाथि कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरुको आर्थिक स्थिति दयनीय भएको अवस्थामा शुल्क बढाउनु अकल्पनीय कुरा हो । त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।”
साथै तत्काल मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको शुल्क बढाउनका लागि गरिएको सिफारिस खरेज गर्न माग गरेका छन् । “त्यसैले तत्काल शुल्क बढाउने सिफारिस खारेज गरेर गत वर्षसरह वा सोभन्दा कम कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै हामीसित सम्झौता भए बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधनको काम अघि बढाउन पनि माग गर्दर्छौ।” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै डा. केसीले विगतमा आफू र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधनको काम अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।
प्रयोग विहीन सिलिण्डरको खोजी गर्दै प्रहरी
पहिरोमा घर पुरिँदा ९ जनाको मृ’त्यु
तपाईंको आज : २०७७ कार्तिक २० बिहिवारको राशिफल
२०७६ चैत २३ आइतवारको राशिफल
सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित कृषि फर्ममा आगलागी: ९ लाख बराबरको क्षति